Ninka milyaneerka ah ee yaraantiisa qashinka lagu dhex tuuray | Somalisan.com
Home Afsomali Ninka milyaneerka ah ee yaraantiisa qashinka lagu dhex tuuray
Wuxuu sheegay in uu si weyn u jeclaa culuumta koombiyuutarrada.
Freddie Figgers oo da’ yar
Sanado ka dib, waxaa soo baxday fursad lagu hagaajinayo barnaamij wax looga qabanayo waaxda biyaha ee magaalada Quincy, Shirkad ayaa soo bandhigtay in $600,000 doolar ay ku baxeyso hagaajinta barnaamijka.
Freddie wuxuu soo xusuustay in uu maamulihii magaalada waco ka dibna u sheegay in uu ka caawin karo shaqadan.
“Marka waxay i siiyeen shaqadii, waxaan sameeyay barnaamijkii, gaar ahaan noocii ay rabeen ayaan u soo bandhigay. Ma aysan i siinin lacagta $600,000, balse waxaa la ii siin jiray lacag joogto ah, guriga ayaanna iska aadi jiray,” ayuu yiri Freddie.
Waa horumar weyn oo uu gaaray Freddie xilliggaas oo 15 sano jir uu ahaa. Wuxuu go’aansaday in uu isaga tego waxbarashada si uu bilaabo ka ganacsiga cilmiga kombiyuutarka – tallaabadaas oo ay ka naxeen waaliddintii soo korsaday.
Wuxuu sheegay in waaliddintiisa ay ku qanacsanayeen in uu wax barto si uu mushaar u qaato, balse isaga wuxuu hamiggiisu ahaa in isbaddal naadir ah uu la yimaado.
Ganacsiga Freddie ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii ballaarinayay.
“Waxaan sameyn doonaa wax kasta inta tabarteyda ah si aan dunida uga dhigo mid wanaagsan, ka hor inta aanan ka rawaxin”
Freddie wuxuu ahaa 24 sano jir markii uu geeriyooday Nathan, bishii January 2014-kii.
“Waa arrin qalbi jab igu reebtay, sababta oo ah waxaan doonayay in aabahay aan ka farxiyo”, ayuu yiri.
Freddie wuxuu $2.2 milyan oo doolar ku iibsaday qalabka la socodka dhaqdhaqaaqa banii’aadanka ee uu ikhtiraacay, wuxuuna sugayay in loo dhameystiro lacago ka maqnaa.
Ninkii soo korsaday Nathan, wuxuu hamiggiisu ahaa in uu soo iibsado gaari xamuul ah iyo doon uu ku kalluumeysto, balse wuu geeriyooday.
“Aabahay ma aheyn qof hodan ah balse wuxuu saameyn ku reebay nolosha dad badan, waxaan doonayay in aan raaco dhabihii uu ii jeexay si aan u caawiyo qof kasta inta taagteyda ah”.
Feddie wuxuu bilaabay hirgelinta mashruuc weyn oo ku aadan sidii uu Internet-ka ku gaarsiin lahaa qeybo ka mid ah deegaanada miyiga Mareykanka maadama deegaanadaas aanan laga helin adeegga internet-ka ee 2G iyo 3G.
Wuxuu doonayay in la helo adeeg isgaarsiin oo casri ah oo la gaarsiiyo deegaannada miyiga, sannadkii 2008, wuxuu codsi u diray guddiga isgaarsiinta federaalka Mareykanka si uu helo ruqsad uu ki bilaabayo shirkadda ganacsi uu isagu leeyahay taas oo qaabilsan isgaarsiinta.
Wuxuu marar badan isku dayay in uu sameysto shirkadda teknolojiyadda, balse sannadkii 2011-kii, Freddie oo 21 sano jir ahaa wuxuu noqday qofkii ugu da’da yaraa ee iska lahaado shirkad qaabilsan isgaarsiinta, sida laga soo xigtay warbaahinta NBC News.
Shirkadda isgaarsiinta ee Figgers waxay noqotay shirkadda keliya ee qaabilsan isgaarsiinta ee uu leeyahay qof madow ah.
Waxaya shirkaddiisa adeegyo gaarsiisay deegaanno miyi ah oo dhaca waqooyiga gobolka Florida iyo koonfurta Georgia, shirkaddiisa ayaa si weyn usii ballaaratay.
Sannadkii 2014-kii, Freddie wuxuu hirgeliyay adeegga casriga ah ee Figgers F1, kaas oo la soconaya dhaqdhaqaaqa socodka ee ‘Safe Mode’ kaas oo dadka adeegsanaya teleefoonnada qaar ka hor istaagaya in ay farriin qoraan xilliga ay baabuurta kaxeynayaan.
Freddie wuxuu guursaday sannadkii 2015-kii, wuxuu heystaa gabadh.
Wuxuu leeyahay hay’ad maalgelisa waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka isla markaana caawisay qoysaska iyo carruurta tabaaleysan.
Barnaamijyadii uu dhawaan qabtay waxaa ka mid ahaa in baaskiil uu ugu deeqay carruurta ku sugan goobaha xanaanada iyo qalabka ka hortagga cudurrada qaar oo uu u qeybiyay shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalayo bukaanada Karoona.
Previous articleArimaha caqabad ku ah sii jiritaanka Shilin Soomaaliga
Next articleDayax madoobaad The new moon occurs Thursday (June 10) at 6:52 a.m. EDT (1052 GMT),
Somalisan News - November 30, 2018